PROF. CAALIN: “Qorshaha Nabad & Nolol ka damacsan tahay doorashooyinka waxaa maalgelinaya Qatar wayna cadahay” | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Uncategorized PROF. CAALIN: “Qorshaha Nabad & Nolol ka damacsan tahay doorashooyinka waxaa maalgelinaya...
Prof. Maxamed Caalin oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay xaalada dalku marayo, wuxuuna dowladda Federaalka hoggaankeeda ku eedeeyay inay dooneyso muddo kororsi, isagoona tilmaamay in ujeedka Dowladda Nabad ay dalka ka waddo burburinta maamul goboleedyada.
Aqoonyahankaan oo inta badan looga bartay dhaliil jeedin kaliya ayaa farta ku goday faragelinta maamul goboleedyada dalka, isagoona tusaale u soo qaatay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan maamul goboleedka Puntland oo uu sheegay inay sababtay xil ka qaadistii Guddoomiyaha Golaha Wakiilada.
“Qorshaha Nabad iyo Nolol ka damacsan tahay doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan 2020-ka” ayuu yiri Prof. Caalin oo u waramayay idaacadda Goobjoog ee magaalada Muqdisho, wuxuuna sheegay in dalka ay ka dhacayaan dagaallo haddii aanay joojin tallaabooyinka hoggaanka haya talada dalka.
Waxa uu sheegay in iyagu ay kor kala socdaan xaaladda siyaasadda dalka oo xilligaan ku jiro kala guur, bacdamaa muddo sanad iyo bilo ah ka hartay xilliga dowladda uu ku eg yahay, hase yeeshee dowladda Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wajaheysa culeysyo uga imaanaya siyaasiyiinta, madax horay xilal u soo qabtay.
Haddaba su’aashu waxay tahay waa kuma aqoonyahan?
Nasiib darro ka weyn ma jirto haddii aqoonyahanadii iyo siyaasiyiinta la kala garan waayo, anigoo taasi ula jeeda in qof darajadiisu gaartay Barfasoornimo ku hafto siyaasadda dalka iyo loolanka u dhaxeeya xisbiayada oo iyagu la taagan yahay xilligoodii maadaama la doonayo in sanadka 2020-ka dalku yeesho dowlad ka duwan tii kahoreysay.
Qofka aqoonyahanka ah xilliyadaan oo kale waxaa looga baahan yahay inuu la yimaado maskax degan, balse dhaleeceynta daa’inka noqotay ee Prof. Maxamed Caalin ma aha mid wadadeeda ku taagan maadaama uusan isagu aheyn guddoomiye xisbi siyaasadeed oo ka suurtowdo inuu sheego dhaliilaha Dowladda iyo hoggaankeeda.
Wax lala yaabo ma ahan in qof leh han siyaasadeed uu ku gaarayo hanashada kursiga ugu sarreeya dalka, waxaa laga yaabaa inaad turunturooto oo uu kaa dhaco khalad fara badan aad tiraahdo sidii uu horay u yiri Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Dowladdii ka horeysay Farmaajo “QABYO NINKEEDA AYAA DHAMEYSTIRA”.
Marka la eego hal qabsigaasi micnihiisu waa howl adiga kuu taala oo aad leedahay, balse taasi jawaabteeda waxay noqonee “Qaranka adiga ma lihid”, igama aha inaan madaxweynaha u gefayo, hase yeeshee waxaan u soo qaatay natiijo la’aanta ay ku dambeyneyso marka aad bulshada u jiheyso sidii ay uga hor imaan lahaayeen Dowladda.
Wax kastaba ahaatee aqoonyahan Caalin waxaa la gudboon in ujeedkiisa uu ku gaaro hab ku saleysan caqli saliim ah, hoggaanka haatan talada dalka haya iyaga qudhooda ma aha malaa’ik la soo diray, way jiraan Xukuumadda dhaliilo loo jeedinayo oo ku saabsan inay ka gaabiyeen hannaanka doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan.
Dowladda Federaalka iyo maamulada dalka ayaan haatan u muuqan kuwo ka heshiiyay sidii laga yeeli lahaa, waxaana laga yaabaa in maamulada Jubaland iyo Puntland ka biyo diidaan maadaama uu weli u dhaxeeyo, halka maamulka Galmudug, Hirshabelle iyo K/Galbeed aanu kala dhaxeynin ismaan dhaaf siyaasadeed.
Aragtiyo kala duwan ayaa laga bixinayaa qaabka ay dalka doorasho uga dhici karto, iyadoo aragtiyaha qaarkood ayba ka keeneen deyro iyo inaysan saamaxeynin xilligaan oo xaaladda ka jirta dalka ka jirta iyo dhameystirka hab raacyada, hase yeeshee arrimahaasi waxay kala cadaanayaan marka Baarlamaanka xilligiisu gabaabsiga yahay go’aan ka gaaro.
Dowladda Madaxweyne Farmaajo oo la soo doortay 8-dii Febraayo 2017-dii ayaa meesha ka saartay khilaafyo horay looga bartay Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaarihiisa, inkasta oo aanay fulin ballanqaadyo uu jeediyay xilligii uu musharaxa ahaa.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa diiwaan geliyay in ka badan 57-xisbi, iyadoo kooxaha mucaaradka ah ka digayaan muddo kororsi ay sameyso xukuumadda, hase yeeshee Madaxweyne Farmaajo oo mar Ra’iisal Wasaare noqday ayaa heysta iskoorka taageerada bulshada, wuxuuna haatan dadaal xoogan ugu jiraa sidii uu ku soo laaban lahaa bacdamaa saaxibadiisa Xasan Sheekh iyo Shariif isku dayayaan sidii ay u jebin lahaayeen iskoorkii uu horay u dhigay.
Jabriil Max’ud Nuur (Jabra Shaaciye)